Amacandelo emarike yemasheya yaseSpain | Ezezimali
Ngaphambi kokuvula izikhundla kwiimarike ze-equity, kuya kuba yimfuneko kakhulu ukuba ucace malunga namacandelo apho imali yakho iya kuthunyelwa khona. Kuba awungekhe ulibale ukuba indlela abaziphethe ngayo yahluke ngokucacileyo komnye komnye. Ngokwahluka kwezicatshulwa ezinokuthi ukufikelela kumanqanaba ukuya kuthi ga kwi-3%. Esi sesinye sezizathu zokuba kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe awona macandelo afanelekileyo emarike yemasheya ngalo lonke ixesha. Ngaphezulu kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha.
Ayisiyongxaki kuphela yokwenza ukuba utyalomali lukhethe ixabiso elifanelekileyo, kodwa necandelo elingena kulo. Esi sicwangciso-qhinga kufuneka senziwe ngokudibeneyo ukuze sisebenze ngakumbi. Ngale ndlela, ungalibali ukuba phantse awuzange uvele onke amacandelo emarike yemasheya ahlala efanayo. Ngenxa yokuba ngamnye kubo ilawulwa ziiparameter ezahlukeneyo kwaye zinokuguquguquka ezihanjiswa zezinye izinto eziguquguqukayo. Ukuze ngale ndlela, amaxabiso abo enziwa ngokomthetho kunye nesithembiso.
Ukwenza lo msebenzi ube lula kuwe, siza kukuveza kwamanye amacandelo afanelekileyo equities kazwelonke. Baphi abanye babo iimpembelelo ezininzi kwisalathiso esikhethiweyo kwimarike yemasheya yaseSpain, i-Ibex 35. Amacandelo ebhanki nawokwakha ngawona anamandla kwaye anefuthe elikhulu kunezinye iimarike zaseYurophu. Akumangalisi ukuba ubunzima bayo obukhulu bungaphezulu kwe-35% kwaye ukuvela kwayo kuthathe isigqibo sokunyuka okanye ukuwa kwexesha elithile.
1 Amacandelo emarike yemasheya: iibhanki
2 Icandelo lokwakha
3 Iinkampani zombane
4 Telecos: kunye nabameli abambalwa
5 Icandelo lezokhenketho elihluka-hlukeneyo
6 Inye kuphela i-inshurensi kwi-Ibex 35
Amacandelo emarike yemasheya: iibhanki
Icandelo lebhanki licandelo ngokugqwesa kwii-equity kuba ubukho balo buthanda ingqalelo yenxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngomsebenzi omkhulu kutshintshiselwano lokukhuseleka kuzo zonke iiseshoni zokurhweba kwaye ezimisela uguquko lokwenyani lwesalathiso esikhethiweyo sentengiso yemasheya yaseSpain. Ngamaxabiso okubaluleka kwe BBVA, Santander, Sabadell okanye Bankinter. Uninzi lwazo zidityanisiwe njengeetshipsi eziluhlaza kwiimarike zezemali kunye nomthamo omkhulu weekhontrakthi. Njengoko zibonakaliswa ngokuba ngamaxabiso alulwelo kakhulu.
Omnye wemithombo emininzi yesalathiso yokwenza imisebenzi kwiimarike zelizwe lethu. Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba lelinye lamacandelo emarike yemasheya elixabise kakhulu kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo ngenxa yolawulo lwezitena kuqoqosho lwaseSpain. Kwelinye icala, licandelo lezabelo kunye nabameli abaninzi. Ngamaxabiso okubaluleka kwe I-ACS, iFerrovial, iAcciona okanye iColonial. Kuba iinkampani ezithengisa izindlu nomhlaba ezifana neyokugqibela zikho. Kuzo zonke iimeko, ziinkampani ezinkulu ezenza imali ezinkulu ezamkela kakhulu ukusebenza kwabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Elinye lawona macandelo afanelekileyo kwizabelo zaseSpain. Apho basebenza njengamaxabiso akhuselekileyo kwiindawo zokungazinzi kwiimarike zezemali. Enye yegalelo lakhe eliphambili yile unikezele ngentlawulo yesahlulo enye yezona ziphezulu kwiimarike. Ngonyaka umyinge wenzuzo ejikeleze i-6%. Yintoni eqwalasela la maxabiso njengesicwangciso sokuqala sokwenza ipotifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokwahlukileyo. Ukuba ngabona batyalo-mali banolwazelelelo lolona luvakalelo ekwenzeni imisebenzi yabo kwiimarike zezabelo. Ukuziqhelanisa nelinye lawona macandelo emveli iminyaka emininzi. Ngezihloko ezininzi ezithengiswayo yonke imihla. Ngabameli besikhundla se-Endesa, Iberdrola okanye i-Naturgy.
Telecos: kunye nabameli abambalwa
Icandelo elibalulekileyo kodwa elinqabileyo kwizabelo zeSpain. Ngamalungu amabini kuphela kwi-Ibex 35, kwelinye icala, enye yeetshipsi ezifanelekileyo zoluhlu lwesitokhwe, ezinje Telefónica. Kwaye kwelinye icala, ukhuseleko olutsha lweCellnex, olungekadweliswa kwiimarike ixesha elincinci kwaye kulindeleke izinto ezininzi ezintle kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngayiphi na imeko, bonke ubunzima buqhutywa ngumnxibelelanisi osebenza kunxibelelwano ngocingo, olunobunzima obukhethekileyo kwimarike yesizwe. Ngokuqinisekileyo ayililo icandelo lonxibelelwano njengakwamanye amazwe okusingqongileyo ngenxa yokunqongophala kweenkampani ezidwelisiweyo kwisibonelelo abasisungula kubathengisi. Icandelo, ngokufutshane, ukwehla kancinci kodwa okuqhubela phambili kuwo onke amanqaku.
Icandelo lezokhenketho elihluka-hlukeneyo
Umzi mveliso wokuqala kwilizwe lethu awumelekanga kwiimalike zezimali njengoko kufanele ukuba uzimise wona. Kwelinye icala, kukho ikhonkco ISol Meliá emele indawo yokuhlala kunye neehotele, ngelixa i-IAG ingumthombo wesalathiso ngaphakathi kwecandelo lemigca yomoya. Kwelinye icala, i-Amadeus kufuneka ibonakaliswe kwintengiso yeemveliso zokhenketho kunye neenkonzo. Kodwa enye into encinci, ngokuchaseneyo nesikhundla esiveliswe kukhenketho eSpain kangangeminyaka emininzi ngoku nesithembiso esingonelisiyo ngokupheleleyo kwimidla yenxalenye enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Nangona kuzo zonke ezi meko, ngevolumu yokugaya abantu ekufuneka ichongwe njengamkelekileyo.
Inye kuphela i-inshurensi kwi-Ibex 35
Kolu luhlu asinakuyihoya indima edlalwa ziinkampani zeinshurensi kule klasi yeemarike zentengiso. Ngaphandle kokubaluleka kwayo okukhulu, singafumana iMapfre kuphela phakathi kweenkampani ezingama-35 isalathiso esikhethiweyo sikazwelonke. Ukongeza, lukhuseleko olulahlekileyo ngokubaluleka kancinci kancinci ngenxa yezihloko ezimbalwa ezibhalisiweyo kwiseshoni nganye yorhwebo. Ngokungafaniyo namanye amazwe kwilizwekazi elidala, apho icandelo leenkampani zeinshurensi lelona libalulekileyo. Umzekelo eJamani naseFrance apho kudweliswe khona iinshurensi ezininzi kwaye zonke zinomthamo omkhulu wothethathethwano. Licandelo elingalinganiswanga eSpain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amacandelo emarike yemasheya yaseSpain